Maalinta: Meey 10, 2020
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Is dhexgalka rasaasta wuxuu bilaabay AKSUNGUR Gawaarida Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn, oo ay soo saartay (TUSAŞ) khibradna laga helay mashruuca ANKA. T ResearchBİTAK Cilmi baarista iyo Horumarinta Warshadaha Difaaca mawduuca [More ...]
Wasaaradda Caafimaadka ayaa ruqsad iib ah siisay daroogada ay soo saartey shirkad dawada maxalliga ah oo loogu talagalay in lagu isticmaalo daaweynta cudurka coronavirus (KOVID-19). Xisaabiyaha rasmiga ah ee warbaahinta xiriirka bulshada Madaxweynaha Fahrettin Altun [More ...]
Kordhinta kiisaska fayraska corona maalmo kadib markii xayiraadaha bulshada ay bilaabeen inay dejiso Jarmalka, waxay sare u qaadday welwelka laga qabo in masiibo mar kale ay xukunka ka dhacdo. Joornaalka maalinlaha ah ee Machadka xakameynta Cudurrada Robert Koch, [More ...]
Mashruuca Mashruuca Maddaarka Diyaaradaha Magaalada Istanbul ee TBM Tunways dhameystiray
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan loolanka adeegga illaa inta ay ka neefsanayaan. Erdogan wuxuu ka qeybgalay Shirweynihii Gayrettepe-Kagithane ee Maddaarka Maddaarka Caalamiga ah ee TBM Tunnels Dhamaystiray Dhameystirka oo lala yeeshay kulan fiidiyow ah halkaasna khudbad ka jeediyay. Khudbadda Erdogan [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Bursa waxay u rogtay bandoowga sabtida iyo axadda sababa la xiriira cudurka faafa ee cudurka 'corona virus' fursado waxayna bilaabeen istaraatiijiyad ku saabsan halbawlayaasha waaweyn ee aan la cusbooneysiin 15-20 sano. [More ...]
dhaqanka Mall for Turkey ugu horeysay bilaabay in 1987 la Galleria Mall ee. Wareegtadan ayaa sii socota iyadoo Capitol AVM la furay 1993. Suuqyada ugu waaweyn ee Turkiga 14-kii AVM ee [More ...]
Iyada oo la adeegsanayo la dagaallanka Coronavirus, ayaa talaabooyin caadi ah laga qaadayaa meelaha qaarkood ilaa berri. Muuqaalka koowaad ee tan waxaa la saadaalinayaa inuu khibrad u leeyahay gaadiidka dadweynaha. Sababtoo ah dhammaan xayiraadaha saaran gaadiidka dadweynaha ayaa sii socda Isniinta, Meey 11, [More ...]
IMM waxay sii wadaysaa inay u wareejiso dhaqdhaqaaqa magaalada oo dhan adeegyadeeda dartiis. Dayactirka, hagaajinta iyo howlaha dib u cusboonaysiinta waxaa laga bilaabay Terminalka Weyn ee Magaalada Istanbul, kaas oo la dayacay ilaa rubuc qarnigii la soo dhaafay. [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul, ayaa ka digtay dhaqan-galnimada bilaabmi doonta Isniinta, 11-ka May. IMM waxay ku isticmaashaa gawaarida gaarka loo leeyahay ee Istaanbuul, laakiin waxaa ka sii muhiimsan, maxaa yeelay meherado badan ayaa mar kale shaqeyn doona. [More ...]
TCDD Tasimacilik wuxuu dhammeystiray koox iyo diyaarin qalab si uu dib ugu bilaabo adeegyadii Tareenka Xawaaraha Sare (YHT), kaas oo loo hakiyey cudurka dillaaca coronavirus; Waxaa laga sugayaa Calaamadda Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha Olcay Aydilek ee Habertürk [More ...]
Go'aanka nidaaminta isticmaalka bilaashka ah ee adeegyada gaadiidka dadweynaha waa la bedelay. Marka loo eego wax ka badalida, gendarmerie iyo ciidamada ilaalada xeebaha ayaa waliba ka faaiidaysan doona adeega gaadiidka dadweynaha ee bilaashka ah Yaa ka faa iidaysan kara adeega gaadiidka dadweynaha lacag la’aan 2002/3654 [More ...]
Istanbul, Turkey ee sürdüy guud soocin ah in magaalada la AVM'si ugu. Magaalada Istanbul waxaa ku jira 125 qof. Suuq cusub oo laga dukaameysto ayaa la qorsheeyay in laga furo magaalada Istanbul 2020. Halkan waxaa ah tobanka Muuqaaleed ee Suuqa Ugu Weyn ee Istanbul [More ...]
Duqa Magaalada Magaalada Izmir ee Magaalada caasimada ah Tunyer Soyer, oo ka qeyb galay munaasabad lagu xusayay maalinta Z Motherbeyde Hanım Memorial Tomb ee Maalinta Hooyada, ayaa yiri, "Maanta waxaan joognaa joogitaanka ruuxiga ah ee hooyadeena ugu weyn." Isagoo carrabka ku adkeeyay inaysan ku filnayn in la xusuusto hooyooyinka hal maalin oo keliya [More ...]
Süleyman Karaman (1956, Alaçayır Village, Refahiye) waa injineer injineer ah oo sidoo kale ahaa maamulaha guud ee TCDD. Nolosha Waxbarashada Kadib markuu noloshiisa waxbarasho ka bilaabay magaalada Erzincan, wuxuu aaday dugsiga sare ee loo yaqaan "Istanbul Pertevniyal High School". [More ...]
In Turkey, waxaa hadda jira isugeyn ah 436 xabbadood Mall. Suuqyada wax iibsigu waxay wax ku kordhinayaan dhaqaalaha iyadoo leh 13,2 milyan mitir murabac oo laba jibbaaran. Qeybta suuqa, oo maalinba maalinta ka dambeysa sii kordheysa, waxay celcelis ahaan tahay 2020 illaa dhammaadka 445. [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay soo bandhigtay sharciyada ay tahay in si tartiib tartiib ah loo raaco sababta oo ah cudurka dillaaca coronavirus, kaas oo si tartiib tartiib ah loo isticmaali doono 11ka Maajo. Kooxo boliis ah oo ka tirsan Dowlada Hoose ee Magaalooyinka waaweyni waxay bilaabi doonaan kormeer 11ka May. Magaalaga Izmir [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay dalbaneysaa 134 bas, oo ay ku jiraan 170 basle iyo 304 solo. Gawaarida waxaa la keenayaa sagaal bilood gudahood marka heshiiska la saxeexo. Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, basaska [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada İzmir waxay siin doontaa taageero nadaafadeed dhirbaaxada iyo timo-jarista, oo dib loo furi doono May 11 iyadoo la raacayo wareegtada Wasaaradda Gudaha. İzmir Dawlada Hoose ee Magaalo Weynaha Ilaalinta Deegaanka iyo Xakameynta Qeybta Koowaad waxaa ku dukaamaysan midkiiba [More ...]
Intii lagu gudajiray coronavirus, wadar ahaan 1,5 milyan 12 kun oo arday iyo waalidiinta ayaa lasiiyay hagitaan 500 bilood gudahood. Wasiirka waxbarashada Qaranka Ziya Selçuk ayaa tiri, 'Markaan bixinno adeeg hagis dhameystiran oo intaas la eg [More ...]
Taageerada caano ceyri ee la siinayo soosaarayaasha caanaha sanadkan iyo arrimaha la xiriira sharciyeynta suuqa caanaha ayaa la go'aamiyay. Go'aanka Madaxweynuhu ku gaadho taageerada caano-qaydhiin iyo Xeerka Suuqa Caanaha ee la samayn doono sannadka 2020, rasmi ah [More ...]
Kulankii 13-aad ee Golaha La-tashiga, oo uu shir-guddoominayay Wasiirka Ganacsiga, Ruhsar Pekcan, waxaa lagu qabtay iyadoo la isticmaalayo fiidiyow. Ka sokow Pekcan, shirka; Madaxweynaha TİM İsmail Gülle, Madaxweynaha DEİK Nail Olpak, TOBB Madaxweynaha Rifat Hisarcıklıoğlu, [More ...]
Wasaaradda Dhaqanka iyo Dalxiiska ayaa billowday barnaamijka Shahaadada Dalxiiska Dalxiiska ee Caafimaadka, kaas oo dhaqan-gal noqon doona laga bilaabo xilliga xagaaga ee 2020. Iyada oo ay hoos imaanayso hoggaanka Wasaaradda, oo ay ku dartay tabarucyada Wasaaradaha Caafimaadka, Gaadiidka, Arrimaha Gudaha iyo Dibadda, iyo iskaashiga dhammaan qeybaha ay khuseyso waaxda. [More ...]
Ujeedada laga leeyahay barxadda halka Galata Tower ay ka qiimo badan tahay dhinaca dalxiiska isla markaana ka dhigaysa halka ay ka bilaabanto dhaqanka iyo nashaadaadka farshaxanka, waxay ka shaqaysaa Mashruuca Wadada Beyoğlu, oo ay soo diyaarisay Wasaaradda Dhaqanka iyo Dalxiiska, [More ...]
Wadooyinka aan loo dayactirin sanado badan ciriiriga taraafikada ee magaalada Bursa ayaa heley raaxo ay sabab u tahay bandowga. Dawlada Hoose ee Bursa, oo cusboonaysiisay danta Merinos - jihada Acemler usbuucii hore, hadda waa isku mid [More ...]